Kanu waa warka culus aan kiinna ahayn | Apg29
Sida iska cad si fiican oo dhan ay ogaadeen in cabsi, iyo cabsi waxay ka mid tahay cadaawayaasheenna inoogu adag oo?
Wax kasta oo dhiiri aynu cabsanno aan la magacaabay karaa laakiin-caafimaad darro inta badan, inay bilaa shaqo ah iyo sidaas oo aan awoodin in ay cunto, dhar inoo soo iibiya, oo aan ku bixiyo kirada waa in on top of cabsi awoodaan.
cadaawayaashooda ugu adag
Beerrey baa ka dhagaxshiidka raacay joonyaddiisii ​​culus weyn on dhabarka. faras A yimid iyo darawalka bixiyeen beeralay ah si aad u hesho socday. Beerreygu wuxuu fadhiistay kolay uu dib ugu faraxsan yahay in uu helay inuu tago hoos. wadaha waxa uu ka codsanayaa:
"Waa maxay sababta ma aha in aad joonyaddiisa?"
"Waxa ay si fiican u noqon lahaa möcke labada I, on bacda lahaa si ay u tagaan," ayuu ku jawaabay beeralay ah.
inta badan waxaan sidaas samayn markii Ilaah bixiyo caawimaad.
ha Waxaan had iyo jeer ma fahmaan in ay jirto cabsi iyo cabsi laga qabo in nagu samayn wax qalad ah.
Waxaan dareemi karaa sidii aad u fahmi in bedelka mustaqbalka dareemi karaa marka dib curyaannada iyo dhaygag at abeesadii gaajeeysan hypnotizes dhibanayaasha ay ka hor waxaa go'an. Sidaas awgeed, waxaan ku degdegin off si fudud ama na guri jiifsaday, oo sameeyo wixii waa in aynaan samayn iyo nafteenna dhibaatooyin dheeraad ah.
Wax kasta oo dhiiri aynu cabsanno aan la magacaabay karaa laakiin-caafimaad darro inta badan, inay bilaa shaqo ah iyo sidaas oo aan awoodin in ay cunto, dhar inoo soo iibiya, oo aan ku bixiyo kirada waa in on top of cabsi awoodaan. Sidaas noqon lacag la'aan. Waxaad iska eryan karaa cabsi badan oo lacag laakiin waa ammaanka ah bararka sida fudud u afuufaan iska leh kacay duufaan weyn ugu yar ee jiritaanka.
Dadka ka cabsashadiisu wax aan la jecel yahay, isagoo aan ahayn fiican, ee in aad keligaa noqoto waa ka weyn yahay ee abid. Waalidiintoodu ka baqayaan mustaqbalka carruurtooda. Carruurta ku nool yihiin cabsi ah in ay dugsiga. Si incomprehension wajiga iyo xoog loo sheegto. Hufan, waayo, Ciise waa ogyahay oo arrintan ku saabsan oo dhan, uu inagu leeyahay inaan ka welwelin ku saabsan cuntada, dharka, ama nolosheena.
Ninna laba sayid uma shaqayn karo waqti isku mid ah. (Luukos 6:24) waa sidaas daraaddeed dooran dhinac? Haa, Ciise caddaynaya. Haddii aad isku daydo in ay u adeegaan laba waqti isku mid ah, waxaa karaahiyo doonaa mid ka mid ah "Tababaraha" kan kalena wuu jeclaanayaa. Sidaas darteed ma jiro dhulka dhexe. Waa maxay waxa ay la cabsi iyo cabsi in la sameeyo our? Halkan Ciise siinayaa crystal sharaxaad cad.
"Ilaah iyo maal uma aad adeegi kartaan. (= Lacagta iyo hantida), ha ugu welwelina naftiinna waxaad cuni doonaan ama wax cabtaan, jidhkiinnana ha ugu welwelina, waxa aad aad huwin doonaa. "
Isaga oo xusuusanaya jiritaanka shimbiraha riixdey ah. Ilaah ina daneeyaa oo markii aannu u ogolaadaa in Ilaaheenna ahu ha oo aynu ka heli doonaa caddeyn in uu yahay Aabbe inoo ah. "Your Aabbihiin waa og yahay waxaad u baahan tahay oo dhan, horta doondoona boqortooyadii Ilaah iyo xaqnimadiisa (halkan yimaado yabooha) iyo dhamaan inta kale ee aad u noqon doonaa. Saar "joonyaddiisii" gaar ah oo ku saabsan "gaadhigii" oo tag on ballankii Ilaah ee nabaadiino oo idinka mid ah oo waxaan ka dhigi aad ka cabsataan.
daawo ugu fiican cabsi
Paul daawo fiican cabsi uu ina siinayaa marka uu sheegayaa sida uu ayaa labada gaajoodaan iyo sidoo kale ku noolaa, ayaa lagu garaacay, walaaca lahaa, mararka qaarkood kiciyey, iyo cirka, jeclaaday oo lagu necbaaday, oo hoos nool yihiin hanjabaado dil. Waxa uu dhammaan na rabitaanka in ay had iyo jeer ku faraxsan oo Ilaah oo dhan xaaladaha nolosha ee mahad.
Si aad Ilaah ugu mahad naqayaa waa doonista Ilaah xagga Ciise Masiix. Waxa sawirrada mammogaraafka ka cabsan in duulimaadka oo na siiyo caawimo ee aad dooranayso sayidkii midig ee waannu ku Noolaan Adduunyada ka Cabsanayn qaybood "cagta ee albaabka" iyo nin dhabqiya isku day in ay soo dhexgelin.